Wararka - Sidee loo helaa jumlada jel cidiyaha wanaagsan?
Sida loo helo alaab-qeybiye wanaagsan oo la isku halayn karoAlaabooyinka jel cidiyaha UVganacsi ?
Sida hadda aad iyo aad u caan ah oo leh farshaxanka ciddiyahaNalalka UV jelsuuqa dhexdiisa, gaar ahaan dumarka.Waxaan arki karnaa inay noqon karto suuq aad u weyn oo suurtagal ah .Markaad akhrinayso maqaalkan , waxay la macno tahay inaad jeceshahay inaad ogaato meesha aad ka heli karto iyo sida aad u heli lahayd lamaane wanaagsan ganacsigaaga hadda.
Waxaad timaadeen meesha saxda ah , halkan ku siin lahaa xoogaa talooyin ah oo ku talinaynaa wanaaggaSoo saaraha Gel Cidiyahaadiga .
Hoos waxaan ku arki karaa qodobada qaar si loo doorto saxdaIibiyaha gel UV :
1. Ugu yaraan in ka badan 5 sano oo shaqadan;
2. In uu waayo-aragnimo sannado u leeyahay suuqa dibadda;
3. Lahaanshaha waaxyo xirfadeed oo laxidhiidha: sida RD, waaxda QC: macneheedu waa alaab-qeybiyuhu wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro waxyaabo badan oo cusub oo wanaagsan si uu u daboolo baahiyaha suuqa, iyo waaxda QC: waxay ka dhigan tahay inay aad u daneeyaan tayada, QC ayaa kormeeri doonta tayada inta lagu jiro wax soo saarka;
4. Haysashada midabada ama noocyada shay ee aad ka dooran karto;
5. Lahaanshaha adeega iibka wanaagsan iyo adeega iibka kadib;
6. Si fiican loo yaqaan habka dhoofinta dibadda;
7. Waqtiga keenista degdega ah haddii loo baahdo;
8. Inuu awood u yeesho inuu taageero muunado bilaash ah oo lagu tijaabiyo suuqa;
Waxaa lagu talinayaa in lala shaqeeyo 12 sano xirfadleSoo saaraha jel poliska"Quruxda midabka cusub",New Color Beauty Co., Ltd waa bixiye xirfadeed loogu kalsoonaan karoGel alaabta PolishShiinaha.Tan iyo 2010, quruxda midabka cusub ayaa ku hawlan cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga tayada sare lehAlaabta UV Gel ee Polish.
Alaabooyinka jel ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: Gel saddex tallaabo ah, jel laba tallaabo ah, Hal tallaabo jel, Top & Base jaakad, jel dhise, Polygel, Jel Xoojinta, jel rinjiyeynta, jel midabka saafiga ah, Platinum jel, Transfer gel, jel Embossing iyo wixii la mid ah.Waxaa jira in ka badan 2000 oo midabo iyo kooxdayada R&D ee dadaalka adag, midabyo badan iyo jel ayaa si joogto ah ugu soo biiraya.
Waxaa laga yaabaa inay toos ula xiriirto dib wanaagGanacsiga ciddiyaha UV :
Waqtiga boostada: Meey-28-2022